နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးအနမ်းရုပ်ကြွင်း – Daily News
နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးအနမ်းရုပ်ကြွင်း
November 10, 2021 - by admm
နှစ်ပေါင်း(၂၅၀၀)ကျော်က ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးအနမ်းရုပ်ကြွင်း
အီရန်နိုင်ငံရဲ့ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှေးဟောင်းသုတေသန နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Teppe Hasanlu မှာ အနမ်းရုပ်ကြွင်းတွေထဲမှာ ရှေးအကျဆုံးရုပ်ကြွင်းလို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ အနမ်းရုပ်ကြွင်းတစ်ခုကို ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေက ၁၉၇၂ ခုနှစ်ကတည်းက တူးဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါဒေသမှာ လူသားတို့ဟာ ခရစ်တော်မပေါ်မီရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လူတွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့ရာ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေအများစု အဲဒီဒေသမှာ တူးဖော်မှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Hasanlu (ca. 800 BCE) ချစ်သူစုံတွဲရုပ်ကြွင်းနှစ်ခုရဲ့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကတော့ သိပ္ပံညာရှင်တွေအတွက် မဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီအရာတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစုံတွဲရုပ်ကြွင်းကို ရွံနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အုတ်တွေနဲ့စီခြယ်ထားတာပါ။ သူတို့တစ်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးသေဆုံးခဲ့တဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်အထိ အနီးကပ်ဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့သလဲဆိုတာ မြင်သာစေပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှက် လက်တွေက သိုင်းဖက်ထားပါတယ်။
အနမ်းပေးနေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ဦးစလုံး မည်သို့မည်ပုံသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ နောက်ကွယ်အကြောင်းတရားတွေကို ဘယ်သူမှလည်း တိတိပပ ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ သူတို့တစ်တွေ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မှန်းဆကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဒီရုပ်ကြွင်းနှစ်ခုရဲ့ သက်တမ်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကလို့ ယူဆရပြီး၊ အမျိုးသမီးလို့ မှတ်ယူလို့ရတဲ့ ရုပ်ကြွင်းက သူမရဲ့ ချစ်သူ သို့မဟုတ် လင်ယောက်ျားရဲ့ မေးစေ့ကို ကိုင်တွယ်ကာ နောက်ဆုံးအနမ်း ပေးနေတဲ့ပုံလို့ အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ အခြားရိုးစုပေါင်းများစွာနဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်ဦပေါင်းများစွာ တူးဖော်တွေ့ရှိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နှဈပေါငျး(၂၅၀၀)ကြျောက ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ နောကျဆုံးအနမျးရုပျကွှငျး
အီရနျနိုငျငံရဲ့ အနောကျမွောကျပိုငျး ရှေးဟောငျးသုတသေန နယျမွတေဈခုဖွဈတဲ့ Teppe Hasanlu မှာ အနမျးရုပျကွှငျးတှထေဲမှာ ရှေးအကဆြုံးရုပျကွှငျးလို့ သတျမှတျခွငျးခံထားရတဲ့ အနမျးရုပျကွှငျးတဈခုကို ဘူမိဗဒေပညာရှငျတှကေ ၁၉၇၂ ခုနှဈကတညျးက တူးဖျောနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
အဆိုပါဒသေမှာ လူသားတို့ဟာ ခရဈတျောမပျေါမီရှေးနှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက လူတှအေခွခေနြထေိုငျခဲ့ရာ ဒသေတဈခုဖွဈပွီး၊ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ သိပ်ပံပညာရှငျတှအေမြားစု အဲဒီဒသေမှာ တူးဖျောမှုတှေ ဆကျတိုကျပွုလုပျနပေါတယျ။ အခုတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ Hasanlu (ca. 800 BCE) ခဈြသူစုံတှဲရုပျကွှငျးနှဈခုရဲ့ နောကျကွောငျးရာဇဝငျကတော့ သိပ်ပံညာရှငျတှအေတှကျ မဖျောထုတျနိုငျသေးတဲ့ ဒဏ်ဍာရီအရာတှထေဲက တဈခု ဖွဈပါတယျ။
ဒီစုံတှဲရုပျကွှငျးကို ရှံနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ အုတျတှနေဲ့စီခွယျထားတာပါ။ သူတို့တဈတှရေဲ့ နောကျဆုံးသဆေုံးခဲ့တဲ့ အနအေထားကို ကွညျ့ခငျြးအားဖွငျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဘယျလောကျအထိ အနီးကပျဆုံးမှာ ရှိနခေဲ့သလဲဆိုတာ မွငျသာစပေါတယျ။ နှဈဦးစလုံးဟာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလြှကျ လကျတှကေ သိုငျးဖကျထားပါတယျ။
အနမျးပေးနတေယျလို့ ယူဆရတဲ့ အနအေထားတဈခုဖွဈပွီး၊ နှဈဦးစလုံး မညျသို့မညျပုံသဆေုံးခဲ့တယျဆိုတာကိုတော့ ဖျောထုတျနိုငျခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ နောကျကှယျအကွောငျးတရားတှကေို ဘယျသူမှလညျး တိတိပပ ခနျ့မှနျးနိုငျဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သခြောတာကတော့ သူတို့တဈတှေ ဘယျလောကျခဈြတယျဆိုတာကိုတော့ မှနျးဆကွညျ့လို့ရပါတယျ။
ဒီရုပျကွှငျးနှဈခုရဲ့ သကျတမျးဟာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး (၂၅၀၀)ကလို့ ယူဆရပွီး၊ အမြိုးသမီးလို့ မှတျယူလို့ရတဲ့ ရုပျကွှငျးက သူမရဲ့ ခဈြသူ သို့မဟုတျ လငျယောကျြားရဲ့ မေးစကေို့ ကိုငျတှယျကာ နောကျဆုံးအနမျး ပေးနတေဲ့ပုံလို့ အကွမျးဖဉျြးသတျမှတျလို့ ရပါတယျ။ ဒီဒသေမှာ အခွားရိုးစုပေါငျးမြားစှာနဲ့ ရှေးဟောငျးအဆောကျဦပေါငျးမြားစှာ တူးဖျောတှရှေိ့ထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
Previous Article အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ လမ်းမဖြတ်ကူးရဲတဲ့ ဆလော့ဝက်ဝံလေးတစ်ကောင်ကို ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ဦးဦးရဲကြီးများ
Next Article ကျွန်းပေါ်ရှိလူဦးရေထက် အမွှာဖြစ်နေသောသူများဖြင့်သာ ပြည့်နှက်နေသော ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့် ဒေသလေး